Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Vaovao Vaovao Vaovao » Tranga COVID-3 miisa 19 no nohamafisina tany Nouvelle Zélande
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao Vaovao Vaovao Vaovao • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Aogositra 18, 2021
Ny praiminisitra Jacinda Ardern dia nilaza fa ny valin'ny filaharana génome dia nanamarina fa ny Delta variant izay mifandraika amin'ny filaharam-pirazanana tranga misy amin'ny fipoahan'ny New South Wales any Australia.
Trangam-piarahamonina NZ an'ny COVID-19 hatramin'ny 10.
Ny fiakarana isan'ny trangam-piarahamonina dia niafara tamin'ny fanidiana faharoa ny firenena.
Ny mpitsabo mpanampy iray vita vaksinin'ny Auckland feno vaksiny dia iray amin'ireo olona nanaporofo fa tsara tamin'ny COVID-19.
Ny totalin'ny trangam-piarahamonina any Nouvelle-Zélande dia voan'ny coronavirus hatramin'ny 10 ny Alarobia, taorian'ny tranga Delta telo hafa an'ny COVID-19 no voamarina androany. Tranga vaovao no ahitana mpitsabo mpanampy vita vaksiny feno avy amin'ny hopitaly Auckland.
Ny sivy amin'ireo tranga ireo dia nampifandraisina tamin'ny tranga hafa teo amin'ny fiarahamonina izay niafara tamin'ny faha-pirenena faharoa lakile ambony ambaratonga manomboka ny talata misasakalina. Ny tranga ambiny dia nampifandraisina tamin'ny sisintany, hoy ny minisiteran'ny fahasalamana.
Ireo tranga telo vaovao, izay ao anatiny Auckland, dia lehilahy 20 taona eo ho eo izay mpiara-miasa amin'ny tranga fantatra, vehivavy eo amin'ny faha-60 taonany izay manana fifandraisana amin'ny sisintany, ary vehivavy iray 20 taona eo ho eo izay manana fifandraisana amin'ny raharaha iray hafa notaterina ny Alarobia lasa teo.
Ny toerana misy fahalianana fanampiny izay nampiana dia nampiana tao amin'ny tranonkalan'ny minisiteran'ny fahasalamana, ao anatin'izany ny casino, Avondale College, supermarket, bar ary kafe maro any Auckland, izay havaozina miandalana satria misy toerana mahaliana hafa hita.
Eo ambanin'ny fidirana Alert Level 4 dia mihidy ny orinasa sy ny sekoly afa-tsy ireo ilaina toa ny supermarket sy ny tobin'ny serivisy.
Page 1 ny 3 Prev Manaraka